Nhau - Nei kubereka kwangu kuchingoerekana kwaita ruzha rwakanyanya?
Jingnai Machinery isainzi uye tekinoroji inotakura bhizinesi rekubatanidza R&D, kugadzirwa nekutengeserana. Iyo kambani iri muLiaocheng guta, Shandong dunhu. Tinogona kupa mhando giredhi P0 (Z1V1), P6 (Z2V2), P5 (Z3V3). Iyo kambani yakawana ISO9001: 2008 uye IATF16949: 2016 system certification. Tinogara kubereka dzakakwirira nemazvo uye yakakwirira waivako mabheyaringi. Parizvino, mabheyaringi edu akafananidzwa nevazhinji vekumba uye vekunze vatengi veOEM, uye kutumirwa kuEuropean Union, South America, Southeast Asia, Middle East nedzimwe nyika makumi matatu.
Kuti tivandudze mukurumbira, kambani yedu inopinda mukuratidzira kuzhinji pasirese gore, uye isu tinoramba tichitora chikamu muchikamu chega chega cheshanghai nyika dzese dzakatakura hunyanzvi hwekuratidzira, china yekuisa kunze uye yekutengesa zvinhu zvakanaka, Beijing nyika dzese mota kuratidza, shanghai Frankfurt auto zvikamu kuratidza nezvimwe .
Welcome to muvhunzo wako uye kurongeka. Ndatenda!
Kubva Zvita 09-12, Kambani yedu ichaenda kuChina International Bearing Industry Exhibition muShanghai, Booth Kwete ndeye 3HD094, gamuchira vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire nekutaurirana.
Kubva Zvita 2 kusvika Zvita 5 mugore ra2020, kambani yedu inotora chikamu muAutomechanika Shanghai, Booth Nha. 1.1H91, gamuchira vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire nekutaurirana.
Kubva munaNovember 24th kusvika 27th mu2020 kambani yedu inozotora chikamu muBauma CHINA 2020, Booth No ndeye N3686. tinogamuchirwa vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire nekutaurirana.
Kubva Zvita 3 kusvika Zvita 6 muna 2019, kambani yedu inotora chikamu muAutomechanika Shanghai, Booth Nha. 1H91 & 8.1A30 inogamuchira vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire nekutaurirana.
Mbudzi 9-12, 2019 Tichaita Tehran Permanent Exibitions Fairground, dumba Nha. 3844/2, tinogamuchira vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire nekutaurirana.
Mbudzi 5-7, 2019, Tichaenda kuAAPEX SHOW (Las Vegas, NV), nhamba yedumba ndeye 8431-9, gamuchira vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire nekutaurirana.
Gumiguru 23 chuma2019 — Oct 26 Oct, 2019, kambani yedu yakawana PTC ASIA Shanghai 2019 Exhibition.
Dumba redu Kwete: D4-5, HALL E6. gamuchirai vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire nekutaurirana.
Kubva muna Gumiguru 15 kusvika 19 muna 2019 kambani yedu inotora chikamu muchikamu che126th cheCanton Fair, Booth No: 8.0J14 & 6.0A17. Tinogamuchirwa vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire nekutaurirana.
Takapinda kuMoscow International Motor Show musi wa 26 - 29, Aug, 2019, dumba redu No.: HALL8.3 G231-1. Gamuchirai vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire uye vataurirane
Isu takapinda kuFILIPPINES AUTO PARTS panguva yaJul 24th, 2019 - Jul 26th, 2019, uye dumba redu No.: 403. Gamuchirai vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire nekutaurirana.
Kubvumbi 23-27, 2019, kambani yedu ichatora chikamu muTrade Fair ye Autoparts muBrazil (Sao Paulo). Booth Nha .: P156. Gamuchirai vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire uye vataurirane.
Mabheyarari akakosha zvikamu mune chero chidimbu chinotenderera michina. Basa ravo rekutanga ndere kutsigira iyo shaft inotenderera ichideredza kukakavara kuti ifambise kufamba kwakatsetseka.
Nekuda kwebasa rakakosha rinotakurwa nemabhegi mukati memachini, zvakakosha kuti ugare uchiongorora mabheringi ako kune chero nyaya, uchiona kuti kuchengetedza kunoitwa panguva yakatarwa.
Zviratidzo zvishanu zvekuti iwe unofanirwa kutsiva kubereka kwako zvisati zvanyanyisa
Kana iwe ukacherekedza kuti kubereka kwako kwakangoerekana kwaita ruzha, iwe ungangodaro uchinetseka kuti chii chiri kuitika. Nei kutakura kwako kuri kuita ruzha uye iwe unofanirwa kuitei nezvazvo?
Verenga pamusoro kuti uwane izvo zvinokonzeresa zvine ruzha uye nhanho dzinotevera dzaunofanira kutora.
Chii chinokonzera kubereka kuita ruzha?
Kana kubereka kwako kwakangoerekana kwatanga kuita ruzha panguva yekushanda, pane dambudziko nekutakura kwako. Ruzha rwakawandisa rwauri kunzwa rwakagadzirwa apo nzira dzekutakura dzakakuvara, zvichikonzera zvinhu zvinoumburuka kuti zvibve kana kurira panguva yekutenderera.
Kune zvikonzero zvakawanda zvakasiyana zvekutakura zvine ruzha asi chakanyanya kusviba. Zvingave kuti kusvibiswa kwakaitika panguva yekumiswa kwekutakura, nezvimedu zvakasara munzira iyo yakakonzera kukuvara apo kubereka kwacho kwakatanga kushanda.
Nhovo uye zvisimbiso zvinogona kukuvara panguva yekukodza kwekutakura, zvichivapa zvisina basa mukudzivirira kubva kune ingress yekusvibiswa - rimwe dambudziko munzvimbo dzakashatiswa zvakanyanya.
Kusvibiswa kunowanzoitikawo panguva yekugadzira lubrication. Zvekunze ma particles anogona kunamira kusvika kumagumo kwepfuti yegirisi uye opinda muchina panguva yekudzoreredza.
Izvi zvikamu zvekunze zvinoita kuti zvive munzira dzekutakura. Kana iko kubereka kwatanga kushanda, chidimbu chinotanga kukanganisa mugwagwa wekutakura, zvichikonzera zvinhu zvinoumburuka kuti zvibve kana kurira uye nekugadzira ruzha rwauri kunzwa.
Chii chaunofanirwa kuita kana kubereka kwako kukatanga kuita ruzha?
Ruzha runouya kubva pakubata kwako rungaita kunge muridzo, kurira kana kupopota. Nehurombo, nenguva iyo yaunonzwa ruzha urwu, kutakura kwako kwakundikana uye mhinduro chete ndeye kutsiva kubereka nekukurumidza sezvazvinogona.
Iwe unogona kuona kuti kuwedzera mafuta mukutakura kwako kunodzikamisa ruzha. Izvi zvinoreva kuti yakagadzirisa nyaya, handiti?
Nehurombo, izvi hazvisizvo. Kuwedzera mafuta kana kubereka kwako kwatanga kuita ruzha kunongovhara nyaya yacho. Zvakafanana nekuisa purasita paronda rekubaiwa - rinoda kutariswa nekukurumidza uye ruzha runongodzoka chete.
Iwe unogona kushandisa mamiriro ekuongorora matekinoroji senge vibration kuongorora kana thermography kufanotaura kana iko kutakura kungangotadza zvine njodzi uye kuverenga iyo yazvino poindi iyo iwe yaunogona kutsiva zvakatakura iko kutakura.
*Maitiro ekudzivirira kutakura kutadza
Zvinogona kuyedza kungoisa chinzvimbo chakatadza uye kuenderera nemabasa ako ezuva nezuva ebhizinesi. Nekudaro, zvakakosha kuti usangoisa chinzvimbo chekutakura chete asi kuti utarisewo chinokonzera kutadza. Kuitisa mudzi chikonzero chekuongorora kunozoona iri iri nyaya, ichikubvumidza iwe kuisa matanho ekuderedza munzvimbo yekudzivirira iyo imwecheteyo nyaya kubva pakuitikazve.
Kuita shuwa kuti urikushandisa inoshanda kwazvo yekuisa chisimbiso mhinduro kune ako ekushanda mamiriro uye kutarisa mamiriro ezvisimbiso zvako pese paunoita kugadzirisa zvinogona kubatsira kudzivirira kubva kune ingress yekusvibiswa.
Izvo zvakare zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti urikushandisa akakodzera maturusi maturuini ako mabheyari. Izvi zvinobatsira kudzivirira kukanganisa kubva pakuitika panguva yekukwirisa maitiro.
* Wongorora mabheyaringi ako
Kuramba uchiongorora mabheyaringi ako kunokupa iwe mukana wakanyanya wekukurumidza kuziva nekugadzirisa zvingangoitika nenyaya nekutakura kwako. Mamiriro ekutarisa masisitimu inzira huru yekuchengetedza hutano hwemuchina wako pasi pekuwongororwazve.
KuJINGNAI, isu tinopa iyo SKF renji yemamiriro ekutarisa michina, kubva ku stroboscopes uye vibration sensors kune yakazara mamiriro ekutarisa masisitimu ayo anosanganidza musono nemishini yako yekutarisa kure.
* Endesa meseji yekumba
Kana kubereka kwako kwakangoerekana kwaita ruzha panguva yekushanda, zvakatokundikana. Inogona kunge ichiri kukwanisa kushanda izvozvi asi ichave ichiswedera padyo nekuswedera kune njodzi kukundikana. Chikonzero chakajairika chekutakura kune ruzha kusvibiswa kunokanganisa nzira dzekutakura, zvichikonzera zvinhu zvinoumburuka kuti zvibve kana kurira.
Mhinduro chete yekubereka kune ruzha ndeyekutsiva kutakura. Kuisa mafuta kunongovhara nyaya chete.